ओली क्याबिनेटबाट यी मन्त्री हुँदैछन् आउट, क-कसले पाउदैछन चान्स ? — Imandarmedia.com
ओली क्याबिनेटबाट यी मन्त्री हुँदैछन् आउट, क-कसले पाउदैछन चान्स ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यलाई हटाउने तयारी गरेको चर्चा चलेको धेरै भयो । ओली सरकारको ६ महिने अवधि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी सत्तारुढ नेकपाभित्रै चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने तयारी गरेको दाबी बालुवाटार स्रोतको छ ।
खासगरी आफ्नै पूर्वपार्टी एमालेका मन्त्रीसँग ओली बढी रुष्ट छन् । अर्को मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हात हालेको, कामभन्दा बढी हल्ला गरेको, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिंडेको, आफ्नो मन्त्रालयमा काम नगर्ने तर, सरकारको समग्र ठेक्का लिने काममा तल्लिन रहेको भन्दै उनले केही मन्त्रीलाई बोलाएरै ‘बोलीमा लगाम लगाउन’ निर्देशन दिएका छन् ।
जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ लगायत छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘धेरै नबोल्न’ निर्देशन दिएपछि ती मन्त्री हाल चुपचाप छन् । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले हप्काएको सूचना पाएका अरु मन्त्री सार्वजनिक रुपमा बोल्दा सचेत भएको देखिन्छन् ।
बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका र पठाई सकेर फर्केका नेपाली छात्राबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण ओलीले कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामा दिन लगाए । उनको स्थानमा हालै मात्र आफ्ना निटक मानिने भानुभक्त ढकाल मन्त्री भएका छन् । ओलीले कस–कसलाई मन्त्रीबाट हटाउन लागेका हुन् भन्ने यकिन नभए पनि पटकपटक विवादमा आएका मन्त्रीहरु उक्त सूचीमा रहेको दाबी श्रोतको छ ।
बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेर बजेट ल्याएको, नेकपाको पक्षमा जनमत प्रभावित हुनुको मुख्य कारकमध्येको एक वृद्धभत्तामा वृद्धि नगरिएको जस्ता आरोप लगाउँदै पार्टीका सांसद र कतिपय प्रभावशाली नेताले नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली भने पूर्ववर्ती काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको ढुकुटी रित्याएकाले बजेट अपर्याप्तताले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको तर्क दिन्छन् । लिकबाहिर गएको अर्थमन्त्रलाई लिकमा फर्काउन केही समय लाग्ने तर्क उनको छ ।
ओली सरकारमा सहभागी हुन आतुर नेतामा पर्छन् नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ । यसअघि नै पौडेल अर्थ र शर्मा गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर, त्यतिबेला उनीहरु सरकारमा अटाएनन् । शर्मा लगातार तेश्रोपटक मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै तत्कालिन माओवादी केन्द्रभित्रैबाट उनको नाम सिफारिसमा परेन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री रहेका शर्मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए । ओली सरकारमा सहभागी हुन लालायित नेतामध्ये अर्का हुन् सुरेन्द्र पाण्डले । पाण्डले झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारमा अर्थमन्त्री थिए । पाण्डेको अर्थमन्त्रीत्वकाललाई बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुनको जस्तै सफल मानिन्छ ।
यिनै पात्रहरुलाई ओलीले आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याउने तयारी समेत गरेको स्रोतको दावी छ ।